होमपेजमा एक्सिर्प्ट्स/साराशं मात्र कसरी देखाउँने ? – Nepali Tech Blog
ब्लग वा वेबसाइटको होमपेजमा पुरै लेख देखाउँनु भिजिटरमैत्रि हुन्न । लामा लामा लेखहरुले होमपेजको लम्बाइ बढाउँछन् । यसो हुँदा पहिलो त पाठकहरुलाई पहिलो देखि तलका पोस्टहरु हेर्न अनावश्यक स्क्रोल गर्दै जानु पर्ने हुन्छ भने यस्तो लामा लामा पोस्टहरुले वेबसाइटको लोडिङ समय बढाउँछन् । यसैले सकेसम्म होमपेजमा लेखको केहि भाग राखेर पुरा लेखका लागि सिंगल पोस्टमा पुर्याउँनु राम्रो हुन्छ । लेखको जति भाग होमपेजमा देखाउँनु पर्ने हो त्यतीमा क्लिक गरेर ‘पुरा पढ्नुहोस्’ भन्ने लिंक राख्न सकिन्छ ।
आज हामी यो पोस्टमा होमपेजमा एक्सिर्प्ट्स/साराशं मात्र कसरी देखाउँने भन्ने बारेमा छलफल गरौँ । सबैभन्दा पहिले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने मैले यहाँ साराशं भनेर पुरै लेखको भावलाई सानो लेखमा देखाउँने भन्न खोजेको होइन । पुरा लेखको थोरै भाग जुन होमपेजमा देखिन्छ, त्यसलाई सजिलोको लागि साराशं भनेको हुँ । जस्तो तपाईले यो लेखको थोरै भागमात्र होमपेजमा देख्नुहुन्छ भने पुरा लेख पढ्नका लागि सिंगल पोस्टमै आउँनु पर्ने हुन्छ ।
१. अटोमेटिक साराशं देखाउँन : कतिपय थिमहरुले स्वत: होमपेजमा साराशंमात्र देखाउँने व्यवस्था गरेका हुन्छन् । यस्तोमा तपाईले आफुले चाहे जति साराशं देखाउँन यति शब्द वा यति क्यारेक्टर देखाउँने भनेर सेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ । एक पटक सेटिङ गरेपछि होमपेजमा आफै साराशंमात्रै देखिन थाल्छन् ।
२. पोस्ट लेखेको समयमा मिलाउँन : यसका लागि तपाईले पोस्ट लेखेकै समयमा कोड राख्न सक्नुहुन्छ । यति चै होमपेजमा देखाउँने र बाँकी हेर्न सिंगल पोस्टमै पुग्नु पर्ने एकै क्लिकले बनाउँन सकिन्छ । यसका लागि तलको तस्विर हेर्न सक्नुहुन्छ ।
यो तस्विरमा तपाईले पोस्ट लेख्ने दुबै अवस्था (visual र text) मा कसरी कोड राख्ने भन्ने देख्नुहुन्छ ।
तपाईले आवश्यक परेको ठाउँमा यो कोड <!–more–> लेखेर पनि साराशं छुट्याउँन सक्नुहुन्छ ।
बोनस टिप्स : लेखको थोरै भाग होमपेजमा देखाउँदा लेखको माथिल्लो भाग मात्रै देखिन्छ । यसकारण पोस्टमा भएको मुख्य जानकारीका लागि सानो भुमिका मात्रै लेख्नुहोस् । यदि आफ्नो लेखको मुख्य जानकारी नै माथिल्लो भागमा लेखिसक्नु भयो भने भिजिटरलाई तपाईको पुरा लेख पढ्ने जरुरी नै हुदैन । यसैले सकभर लेखको भाव जानकारी दिने तर कौतुहललाई थप बढाउँने गरि माथिल्लो भाग लेख्नु पर्छ । “थप जानकारीका लागि पुरा लेख पढ्न क्लिक गर्नुहोस्” वा “पुरा लेख पढ्नुहोस्” जस्ता वाक्यांशमा साराशं टुंग्याउँनु भएको छ भने भिजिटरले पुरा लेख पढ्ने सम्भावना बढि हुन्छ । तर यसो भन्दैमा लेखलाई अतिरञ्जित नगर्नुहोला ।
नबिर्सिनुहोस्, जसरी भएपनि झुक्याएर एकपटक भिजिटर ल्याउँदैमा तपाईको जित हुन्न किनकि राजमार्गमा बेच्न राखिएको खाना जस्तो होइन ब्लग । जति राम्रो लेख र प्रस्तुति तथा जानकारी दिन सक्नुहुन्छ उति नै भिजिटरहरु तानिनेछन् ।
अझ थप केहि जानकारी चाहिएमा अथवा तपाईले यो पोस्ट हेरेर नयाँ कुरा थाहा पाउँनु भएको भए सेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नु नी ।
do not miss latest वर्डप्रेस